Kedu ihe kpatara Okwu Iche Iche WordPress gị Kwesịrị Iji Na-anabata | Martech Zone
As nhazi mmeghachi omume -eto eto na-ewu ewu, M na-ahụ ụfọdụ ịrịba mmejuputa iwu nke emeghachi omume. Na ndị ahịa na-enweghị ebe nrụọrụ mkpanaka akọwapụtara, anyị na-ahụ mmezi pụtara ìhè na Nchọpụta ọchụchọ engine dị ka nke ọma.
Isiokwu WordPress ejirila usoro ahụ ma enwere ụfọdụ ihe atụ dị ịtụnanya n'ebe ahụ (anyị gị n'ụlọnga saịtị ahụ bụ otu n'ime ha). Ọ bụ ezie na ụdị na ụdị dị iche iche dị mgbagwoju anya, nnukwu uru a na-enwe enweghị ịchekwa otu anya na mmetụta dị n'ọtụtụ ebe, ma ọ bụ site na ngwa mgbakwunye. Anyị na-atụ anya na anyị ga-emecha mee Martech Zone na-anabata otu ụbọchị!
Nke a bụ ụfọdụ uru ịzụrụ isiokwu na-aza ajụjụ maka WordPress mmejuputa ya site na ndị folks na Gburugburu WP Na-anabata:
Tags: emeghachi omume gburugburuWordPresswordpress anabata gburugburuwordpress gburugburu